Offshore Banking Information yeAsset Protection uye Privacy
Offshore banking iri kugadzirisa kambani yebhangi kunze kwenyika yekugara. Chinangwa chacho kazhinji chekuchengetedzwa kwemari, kubhadhara mutero (zvichienderana nenyika yebhengi wekambani), mari yehupfumi uye kugadzirirwa kwemari. Nokuti 96% yemhosva dzenyika inoitika muUnited States, vanhu vakawanda veUnited States vakatsvaga mvumo kunze kwemiganhu yavo kuti vawane pfuma yavo mumhepo yakachengeteka.
Dzimwe nguva, nhau dzemashau dzinokurukura mabhangi ekumahombekombe. Nhau dzakanaka dzinotengesa zvidimbu zvishomanana kudarika nhau dzisina kunaka, saka zvakawanda zvinotaridzika zvinowanzova kune rimwe divi rekumhenderekedzo yebhanga rekumahombekombe: vatongi vekunze kune dzimwe nyika vanoviga zvakashata zvakashata, mabhizimisi vasina hanya vanovhara zvakavanzika mararamiro akaipa, mitero yemitero, nezvimwewo. Uyezve, vamwe iyo nyaya dzine chokuita nemitemo yakaiswa nehurumende yeUnited States. Mitemo yakave yakagadziriswa kwemakore ekudzivirira kutamba kwemitero, inobhadhara mari yezvemagandanga uye kuchenesa mari kubva kune zvinodhaka uye zvimwe zvisiri pamutemo. Zvinonzwisisika, hurumende yehurumende inofanira kutora matanho pakubata nenyaya dzakadaro.
Kunyange zvazvo mitemo iyi ichireva kupesana nemabasa asingabvumirwi nemutemo, hurumende dzehurumende hadzina hanya nevaya vanoda kushandisa bhishopu rekumahombekombe sechikamu cherongwa hwekuchengetedza mararamiro. Kushandisa mabhizimisi ekumahombekombe pamwe chete nedzimwe nyika dzakadai seZ LLC uye kuvimba kunowedzera kuwedzera sezvo kutyiswa kwemhosva kunowedzera.
Iko kuchinja kwematongerwo enyika kunogadziriswa uye kwavari kuenderera mberi kunobva munyika. IUnited States iri kuedza kutarisa basa reimwe nyika iyo inowona simba guru rezvigandanga uye zvinopisa mhosva, uye hazvikwanise kutarisa nyika ine zvamahukama hukama.
Semuenzaniso, hurumende yeSwitzerland, nyika inowanzoenderana nemaonero akaisvonaka neUnited States, haina kunyatsoongororwa. Yakabvumirana kukwana kushandiswa kwehuwandu hwematongerwo enyika kuchinja Izvi zvinoreva kuti Swiss bank accounts, kunyange vachiri kupa zvikamu zvakasimba zvehupfumi kune vashandi veActiber account, vachaderedza zvimwe zvekuchengetedza zvakavanzika zvidziviriro kana iyo nhoroondo ichibatanidzwa mumabasa asina kukodzera.
Nyika Inopa Offshore Banking
Kune hurumende dzinoverengeka dzinopa mabhizinesi mabhengi kune dzimwe nyika, kusanganisira avo vari muUnited States. Vakawanda venyika idzi hazvifariri zvakakwana kuti hurumende yeUnited States ipe mvumo yekucherechedza nguva ipi neipi munguva yemberi iri mberi. Uyezve, vazhinji veavo vakarondedzerwa pano vane mitemo yakasimba yekusungirirwa kuti vadzivirire basa rekuchengeta mitemo yevashandi varo. Dzimwe dzenyika idzi dzinosanganisira, asi hazvirevi kune:
English Channel Islands yeJersey neGuernsey
"Offshore" Incorporation muUnited States
Kuwedzera kune runyorwa rwezvinoratidzwa pamusoro apa, kunewo mukana wevanhu vanogara kunze kweUnited States kuwana dare rakaenzana rekuchengetedza kwebhangi rekubhengana rakafanana neiyo inopiwa neAustralia bank account. Semuenzaniso, Delaware inounza kune vatengi vemabhengi emabhengi mamwe mashoma, kunyange zvazvo kwete ose, ekudzivirirwa uye maitiro, anowanzowanika nevaya vanoshandisa mabhizimisi emabhangi ekunze. Mamwe mazita mashomanana ayo anoshanda asingabhadhara mutero wemari inobhadhara mari anogonawo kubhadhara vashandi vebhangi yebhangi. Mamwe ematunhu aya anosanganisira Nevada, Washington, uye Wyoming. Saka, munhu muUnited States asina kukodzera kuenda kune imwe nyika kana munhu anogara kunze kweU.SA ane zvimwe zvaanoda mukati meUnited States.
Makomborero Okuva neAshoshington Bank Account
Nhoroondo yebhengi yebhangi kana bhangi rebhangi iro rakavhurwa munharaunda kunze kwenyika yevigariti yeimba inoshandiswa kune zvimwe zvezvikonzero zvinotevera:
Nhoroondo dzebhangi dzakawanda dzebhishopi dzinopa humwe hutengo hwemari shoma kupfuura mabhengi ebhengi muUnited States. Offshore mabhangi anowanzopa zviyero zvinodarika zviri nani pane izvo zvinowanzopiwa muUnited States. Sei? Nokuti mari yekushandisa bhangi yakaderera mune dzimwe nyika dzakawanda. Izvi zvinoguma nemari yakawanda yakasara mumabhengi ekubhadhara kubhadhara kune vanoisa mari.
Nzvimbo dzakawanda dzinotendera mabhizinesi mabhizimisi kune dzimwe nyika dzinowanzouya nemutengo wakaderera mutero, kukwezva dzakasiyana-siyana dzemakambani ose uye vanhu vari voga kuti vaite bhizimisi navo. (Ramba uchiyeuka kuti vanhu veUnited States vanobhadhara pamari yepasi rose zvisinei nokuti mari yacho "yakadzoserwa" kana kwete.)
Kukwereta mari pachidimbu chechibereko.
Mushoma mitemo paunokwereta mari.
Kune chikamu chikuru, mabhangi ekumahombekombe anopa zvakawanda zvakavanzika uye anowanzoita kuti zviome kune avo kunze kuti vawane ruzivo pamusoro pekambani kana munhu anochengetedza kambani. Nzvimbo yevamwe yakasiyana-siyana nenyika.
Nyika dzine hurumende dzakagadzikana uye dzinobudirira dzinounza nehuwandu hwekudzivirirwa kune zvinetso zvezvematongerwe enyika, zvematongerwe enyika uye zvezvemari zvinogona kuitika munyika yekwavo. Zvinonzwisisika, nyika idzi dzakagadzikana dzinopa sarudzo dzakanaka dzekutsvaga iwe nebhizimisi rako. Sezvo hupfumi muUnited States huri kuenderera mberi kuchinjeka, kuedza kubvisa kubva mukuderera kwayo kwekupedzisira, pfungwa iyi yakanyanya kuwedzerwa kune mapato ega ega uye mabhizinesi avo.
Kune dzimwe sarudzo dzekudyara. Izvi zvinopesana nezvingaitwa nemushambadzi neaccount yebhangi munyika yekwake. Vazhinji vanhu vanosarudza kusarudza kutsvagirwa mari pamhenderekedzo kana maakaundi emhiri kubhengi anoona kuti maakaunti acho haana chete chimiro chiri nani asi mukana wekushanduka. Semuenzaniso, mabhengi mazhinji ari kumahombekombe anopa maakaundi emubhengi emusika, masheya emisika yekutengesa, simbi dzinokosha, nezvimwewo, ese ari padenga remba.
Mari yepaIndaneti inowanikwa.
Customer service benefits. Vazhinji vemahombekiti ekubhengi mabhengi akaita sevhisi iyo yevhisi inowanikwa mune imwe nguva iyo inopesana neyo yeimba yake.
Ruzhinji rwevanhu vanoshandisa mabhizinesi mabhangi ekumahombekheni vanozarura maakare avo mumasangano epamutemo edzimhosva. Aya masangano anogona kusiyana kubva kumakambani e-offshore ne LLCs kuenda kumahombekombe egungwa ekuchengetedzwa kwemasitirwo uye nheyo, zvichienderana nezvinodiwa zvomumwe munhu.
Offshore nhoroondo dzinoshandiswawo nevashandi vanopiwa basa nekunze kwenyika, vashandi vemunyika yose, vafambi, uye vanoenda kune dzimwe nyika.
Vatengi vemakambani vanoonawo kuti mabhizimisi emabhangi epahombekombe anopa zvikomborero pakushandisa kwekugadzirisa kwezvemari. Makambani anoedza kuita izvi angashandisa mabhizinesi ebhanga rekumahombekombe uye anoshandisa masangano akawanda emarudzi akawanda, achivabvumira kuratidza kuwana mari kana kurasikirwa zvichienderana nehuwandu hwemari dzinoshandiswa. Zvinonzwisisika, kutevedza kwakakwana kwepamutemo uye kumitero kunokurudzirwa zvakasimba.
Chimwe chikonzero nei vashandi vemakambani vanoshandisa mabhizimisi ebhengi kune imwe nyika ndeyekuwedzera rusununguko mukati mekuda mari kwekambani, kusanganisira kukwanisa kukurumidza nekubhadhara vashandi uye vatengesi mune dzimwe nyika.
Ziva Mitemo Yako Yemitero
Kuwedzera kune mashoko anotsanangurwa pamusoro apa, vanhu vakawanda nemitemo yemakambani anotsvaga kugadzira mabhizinesi ebhishopi ekunze anotarisa izvi zvichienderana nechitendero chenhema kuti zvikwereti, mari inowanikwa, nemamwe marudzi emari hazvikwanisi kubhadharwa munharaunda yenyika yekugara. Iko kufungidzira uye kukundikana kubhadhara mitero munyika yako pachako hakugoni kungova mari yakaipa kune iyo kambani pachayo, asi mumatambudziko mazhinji, iyo hainawo mvumo.
Somuenzaniso, muUnited States pane mutemo wemitero unoda kuti vagari veUnited States vanyore mari ipi zvayo yakaitwa kune dzimwe nyika, sezvakataurwa pamusoro peUnited States fomu yerimwe 1040:
"Iwe unofanirwa kuudza kusawana mari, yakadai senharaunda, chikamu, uye pensions, kubva kune dzimwe nzvimbo kunze kweUnited States, kunze kwekuregererwa nemutemo kana mutero wemitero. Iwe unofanirwa kupawo mari inowana mari, yakadai semaripo uye mazano, kubva kune zvinyorwa kunze kweUnited States. "
Uyezve, iri paParamende B, fomu yako yemitero inonyatsokumbira, pasi pechikamu cheNharaunda uye Zvimwe Zvidimbu, kuti unoshuva kufarira uye kugoverwa mune chero zvikwereti kana kuti matariro ari kunze kwenyika.
Nokudaro, pasinei nekuwanzofungirwa kusinganzwisisiki kuti bhengi rebhangi rekunze rinokonzera mumwe kubhadhara mitero yeUnited States, ani zvake anozadza fomu yemutero anogona kuona kuti kutenda uku hakusi kwakarurama. Nzira yakarurama yepamutemo ndeyekuzivisa zvose zvekuwanikwa kune imwe nzvimbo. Kutaura zvazviri, nyika dzakawanda dzinoda vagari varo uye / kana vagari venyika kuti vanyore mari ipi neipi inowanikwa kunze kwenharaunda yayo.
Ndezvipi Nheyo Dzakashambadzira Mabhangi Anopa?
Mazhinji mabhangi ekumahombekombe anopa mhando dzemhando dzebasa semabhengi eUnited States. Kunyanya, mumatambudziko mazhinji, vanopa zvakawanda. Zvisinei, zvichienderana nehutongi hwe mabhanga kune dzimwe nyika, mitemo nemikana zvinogona kusiyana, uye mitemo inowanikwa munyika nehurumende yeUnited States inogonawo kuchinja.
Kazhinji, mabhenji akawanda epahombekombe anopa:
Nhoroondo dzekuchengetedza zvigadziro uye mabasa ekudzora
Mareji epamberi uye kusarudza mari
International trade financing, shanduro dzekunze, uye multi-currency transactions
Kugadzira bhengi rebhangi rekumahombekombe kazhinji kacho hachisi nyore. Chokutanga, gadzira an offshore corporation kana LLC yakaumbwa. Kambani yacho haifaniri kuumbwa munzvimbo imwechete yekodzero sebhangi yebhangi. Chechipiri, dzakawanda zvezviitiko izvi zvinogona kuumbwa pasina chido chekufamba. Nokudaro, kukwanisa kuumba imwe yezvinyorwa izvi zvose zviri nyore uye zviri nyore. Nemhaka yezvakasiyana-siyana zvenyika dzaunogona kusarudza kubva, unogona kufanana nenyika yako yakasarudzwa kuti iwirirane nezvido zvako.
Tsvaka Nhungamiro Yedzidzo
Mazhinji mabhangi ekumahombekombe haazombozaruri mabhengi evanhu vekune dzimwe nyika. Zvimwe zvinonakidza kushanda pamwe uye zvimwe hazvina kudaro. Saka iva nechokwadi kuti uwane rubatsiro kubva kune imwe nyanzvi inonyanya kugadzirisa mabhangi ekumahombekombe. Pane nhamba dziri papeji ino uye fomu yekuzadza kuti uite nhaurirano nemuzidzi ane ruzivo uyo anogona kukuwana iwe ruzivo rwakanoda kuita sarudzo.
Kana iwe uri kufunga nezvekuumba bhangi rebhangi rekumusoro uye kusazeza nekuda kweimwe yemashoko ezvokutaura zvenhau, ziva kuti kutevera, kana kuri kuitwa zviri pamutemo uye kwakachengeteka, kunogona kunge kwakanaka chaizvo uye kunobatsira kune avo vachitsvaka rusununguko rwemari, kuchengetedzwa kwezvinhu, uye zviduku zvishoma. Inenge makumi mashanu kubva muzana yemutengo wenyika inoita nzira yayo kuburikidza nemabhengi emabhangi ekunze. Izvi zvinoreva kuti mabhizimisi ekubhishopu ekunze akakurumbira uye anozivikanwa.
Offshore bank accounts ikozvino inobata inenge makumi maviri nematanhatu muzana yehupfumi hwenyika. Iyi nhamba inosanganisira makambani makuru makuru ari kuUnited States asi achishandisa mabhizimisi ebhanga rekumahombekombe kuti vashandise zvavanowana. Nhamba inofungidzirwa yeUnited States mari inofungidzirwa kuti inowanikwa mumabhangi ekumahombe inenge madhiyoni matanhatu emadhora, iyo inzvimbo huru yehupfumi munyika.